Yiyiphi imbono kwiMbali ye-Idealist Philosophy?
Iimbono ziyinxalenye yeenkqubo zefilosofi ezithi inyaniso ixhomekeke kwingqondo kunokuba zimelele engqondweni. Okanye, faka enye indlela, ukuba iingcamango kunye nengcamango yengqondo okanye iingqondo zenza i-essence okanye imeko ebalulekileyo yinto yonke.
Iinguqulelo ezigqithiseleyo zeMbono ziphika ukuba nayiphi na 'ihlabathi' ikhona ngaphandle kweengqondo zethu. Iinguqulelo zeNgcaciso zeNgcaciso zithi ukuqonda kwethu okwenyaniso kubonakalisa ukusebenza kweengqondo zethu kuqala nokuphambili - ukuba iipropati zezinto azikho ukuma ezizimeleyo zeengqondo eziziwayo.
Ukuba kukho ilizwe langaphandle, asinakukwazi ngokwenene okanye sisazi nto malunga nalo; konke esinokukwazi ukuba yenziwe ngengqondo eyakhiwe iingqondo zethu, ngoko (ngokobuxoki, ukuba kunengqiqo) sibonisa ihlabathi langaphandle.
Iifom ze-Theistic zeengcamango zenkqenkqenkqiso kumqondo kaThixo.
Iincwadi ezibalulekileyo kwiMvelaphi
Ihlabathi kunye nomntu ngamunye , nguJoseph Royce
Iimigaqo zoLwazi lwaBantu , nguGeorge Berkeley
I-Phenomenology yoMoya , yi-GWF Hegel
I-Critique yeSizathu Esilungileyo , ngu-Immanuel Kant
Amafilosofi abalulekileyo aMbono
UGottfried Wilhelm Leibniz
UGeorg Wilhelm Friedrich Hegel
Iyini "Ingqondo" kwiNgcono?
Ubume kunye nobuni "yengqondo" apho inyaniso exhomekeke kuyo yinto enye eyahlula iimbono zeentlobo ezahlukeneyo. Abanye bathi inengqondo ethile ngaphandle kwengqungquthela yemvelo, abanye bathi bodwa nje amandla aqhelekileyo okuqiqa okanye ukuqonda, abanye bathi banobuchule beengqondo zoluntu, kwaye ezinye zijolise kwiingcinga zabantu ngabanye.
Ngokutsho kwePlatonic Ideality, kukho indawo epheleleyo yeFomu kunye neZiko kwaye ihlabathi lethu liqulethe izithunzi zelo buso. Oku kudla ngokuba yiPlatonic Realism "kuba uPlato ubonakala echaphazelekayo kule fomu ukhokelo oluzimeleyo lwengqondo. Abanye bathi, ukuba uPlato wayebambelele kwisimo esifana neCant's Transcendental Idealism.
Ngokutsho kukaRené Descartes , into kuphela eyaziwayo yiyo nayiphi na eyenzekayo engqondweni zethu - akukho nto yehlabathi langaphandle ingafikelela ngqo okanye iyaziwa ngokuthe ngqo. Ngaloo ndlela kuphela yinyaniso yokwenene esinokuyifumana kukuba yikho ubukho bethu, isikhundla esifingqiweyo kwisitatimende sakhe esidumileyo "Ndicinga ukuba ngoko ndilapha." Wayekholelwa ukuba le yodwa ibango lwazi elingenakuqinisekiswa okanye libuzwe.
Ngokutsho kobuGcisa obuPhezulu, iingcinga kuphela ziyakwaziwa okanye zinokwenyani (oku kwaziwa nangokuthi i-solipsism okanye i-Dogmatic Idealism). Ngaloo ndlela akukho mabango malunga nantoni na engaphandle kwengqondo inokholo. UMbhishophu uGeorge Berkeley nguye owayengummeli oyintloko wale ndawo, kwaye waxela ukuba izinto ezibizwa ngokuba "izinto" kuphela zazikho nje ngendlela esaziqonda ngayo - azizange zakhiwe ngokuzimeleyo. Ukubukeka kwakubonakala ngathi kuqhubeka ngenxa yokuba abantu baqhubeka beqonda izinto okanye ngenxa yokuthanda nokuthanda kukaThixo.
Ngokwale ngqungquthela, yonke inyaniso isekelwe kwingcamango yengqondo enye - ngokuqhelekileyo, kodwa kungekhona njalo, ichongiwe noThixo-leyo ibonisa ukuqonda kwayo yonke into engqondweni yabo bonke abantu.
Akukho lixesha, indawo, okanye enye into engaphandle kweengcamango zalo Mqondo; Ngokwenene, thina bantu asihluke ngokwenene kulo. Sifane ngakumbi kwiiseli eziyinxalenye yendalo ebanzi kunokuba zizimeleyo. Injongo Yembono yaqala ngoFriedrich Schelling, kodwa yafumana abaxhasi kwiGWF Hegel, uJosiya Royce, kunye no-CS Peirce.
Ngokutsho kwe-Transcendental Ideality, eyenziwa yi-Kant, le ngqungquthela ichaza ukuba lonke ulwazi luvela kwizinto ezibonakalayo eziye zahlelwa ngamacandelo. Kwakhona ngamanye amaxesha kwaziwa ngokuba yiCritical Idealism kwaye ayikhanyeli ukuba izinto zangaphandle okanye izinto zangaphandle zikhona, ziphika nje ukuba asikwazi ukufikelela kwinyani, eyona nto ibalulekileyo yinyani okanye izinto. Konke esinakho ukuyiqonda.
Ngokutsho kwe-Absolute Idealism, zonke izinto zifana neengcamango ezithile kwaye ulwazi olulungileyo luyinkqubo yeengcamango. Kwakhona kwaziwa ngokuba yiNjongo yokuBonelela kwaye luhlobo lweengcamango ezikhuthazwa nguHegel. Ngokungafani nezinye iinjongo zeengcamango, oku kuyingcamango - kukho ingqondo enye kuphela apho inyaniso iyadalwa.
Ukutyhila UThixo Ongakho
Ngaba UThixo Uyabalulekile?
Inzululwazi ivumela ukuba sithi uThixo Akakho
Ngaba uPaul McCartney noNancy Shevell's Wedding Vegetarian okanye Vegan?
Iindawo zaseGeorgia zezoTyelelo kunye neendawo
Igrama: Igama lomntu
Iimbolc Amasiko kunye namasiko